Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana ao Theda Bara | Madonna - Fikarohana momba ny vatana
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Madonna dia nohamafisin'i Ahtun Re ho lasa teraka indray ao amin'ny vatana vaovao indray Theda Bara, izay marika ara-panehoana ny vanim-potoana mangina.
Nitafy akanjo manaitaitra sy mihantsy i Theta, sahala amin'ny fitafiana mitovy amin'ny akanjo lava an'i Madonna.
Ny mahaliana dia azo inoana fa mino ny fiverenan'ny vatana vaovao i Madonna, satria izy dia mpanohana matanjaka ny Kabbalah Center tany Los Angeles. Ny firaisana amin'ny vatana dia ekena amin'ny fampianaran'ny fikambanana. Nanana tombontsoa aho hanao fampisehoana amin'ny porofo momba ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana vaovao Yehuda Berg, izay mpiara-mitantana ny Ivontoerana Kabbalah.
Fitoviana ara-batana: Ny endriky ny endriky ny Theda Bara sy Madonna dia tsy miovaova. Ny fahasamihafana dia i Theda no mitazona lanjany bebe kokoa, raha toa kosa i Madonna dia mionona rehefa mihalehibe izy.
Innate Past Life Talent: Samy mpandala ny mahazatra sy iraisam-pirenena avokoa ny Theda Bara sy Madonna.
Fiovan'ny finoana sy ny fiaraha-monina: Theda dia teraka tamina fianakaviana jiosy manana faka poloney sy soisa, ary i Madonna kosa teraka tamin'ny fianakaviana katolika italianina. Ny fiainan'ny Madonna jiosy taloha tamin'ny naha-Theda azy dia mety hanazava ny fifandraisany amin'ny Kabbalah, izay rafitra ara-panahy jiosy esoterika.